सरकार सिके रावत लाइ जेल हाल – भिडियो – Complete Nepali News Portal
सरकार सिके रावत लाइ जेल हाल – भिडियो
February 28, 2017	3,427 Views
Writer : Sargam Bhattarai
Vocal : Tika Adhikari
Source : DAinik Nepal
सि. के. राउतहरु हो: मधेशी र पहाडी बिच बिभाजन ल्याएर स्वतन्त्र मधेश बनाउछु भन्ने स्यालहुईया बन्द गर । मधेश तिमी र तिमी जस्ता बिखण्डनकारी हरुको नीजि जग्गा होईन , जे मन लाग्यो त्यही गर्ने । मधेश बनाउन हाम्रो पनि रगत पसिना बगेको छ, सक्छौ नेपाल भित्र मधेश अटाउने कुरा गर, होईन भने आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न तयार होऊ । मधेशी जनतालाई गुमराहमा पार्ने राज्य सत्ता भन्दा बढि तिम्रै मान्छेहरुले हो । शिक्षा, स्वास्थ्य , संचार, यातायात सबै क्षेत्रमा जाने बजेट कामै नगरी कप्लक्क खाने तिम्रै मान्छेहरु हुन् । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मरेका मान्छेको ल्याप्चे ठोकेर खाने तिम्रै दाजुभाइ हुन् , बिकासे परियोजनामा नौ को काम गरेर नब्बे प्रतिशत खाने त्यतैका बाबुहरु हुन् ।
सिमाना तिर अपराध गरेर सिमा पारी आफ्नै घरमा बस्नेहरु त्यतैका हुन् र तिनैको लागि स्वतन्त्र मधेश चाहिएको हो, सिमा पारी अपराध गरेर यता आएर लुक्नेहरुका लागि स्वतन्त्र मधेश चाहिएको हो । गरी खाने मधेशीको भाग तिमी जस्ता सुट र बुट वाला मधेसी भनाउँदा हरुले खाएका हुन् ।